Ogaden News Agency (ONA) – Raisal Wasaaraha Taliska Ethiopia oo Lagamgameeyay- lanabahdillay oo halkaas ku baroortay
Raisal Wasaaraha Taliska Ethiopia oo Lagamgameeyay- lanabahdillay oo halkaas ku baroortay
Posted by Dayr	/ June 13, 2015
Wargeyska Caanka ah ee Indian Ocean oo ah wargeys wax kaqora siyaasadaha caalamka ayaa cadadkiisi 29/05/2015 kagawaramay qiimeyn xisbiga EPRDF/TPLF ku sameeyeen Xayle Maryan Desaalay Raisal wasaaraha taliska Ethiopia.
Raisal Wasaaraha taliska Ethiopia qiimeyntan lagu sameeyay oo loo yaqaano (GAMGAMAA) ayaa waxaa la dhageystay mudadii uu xilka hayay, Gamagamaha oo ah nooc aad u fool xun oo lagu qabso shaqsiga innuu qirto danbiyo uusan laheyn ama uu naftiisa ku qadfo innuu danbiyo uusan galin uu sheegto innuu galay, ayaa wargeyska Indian Ocean waxa uu soo qoray in raisal wasaaraha Dalkaas Ethiopia si aad u fool xun loola dhaqmay lana bahdilay.
Raisal wasaaraha talsika Ethiopia ayaa oohin badan indhihiisa kazsoo daadatay waxaana halkaas uu kala kulmay dhaqan xumo tii ugu xumeyd ee loo geysto nin raisal wasaare ah. Wargeyska ayaa sheegay in xogtan uu ka helay dad goob joogayaal ah oo kamida xisbiga EPRDF/TPLF.
Talada dalka Ethiopia waxaa gacanta ku haya Qowmiyada tigreega xibigooda TPLF, waxaana jiray siyaasad lagu kala qeybsanaa oo xisbiga tigreegu aad ugu kala fogaayeen iyada oo qeyb kamid ahi ay taagero u hayaan Raisal wasaaraha Qeybkalena aad uga soo horjeedaan oo ay rabaan in nin tigree ah laga dhigo raisal wasaaraha Dalka Ethiopia.
Raisal wasaaraha Dalka Ethiopia ayaa kazoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku jira gumeysiga.
Halkan ka aqriso warbixinta Indian ocean (africaintelligence)